Diplomasi Mareekan Tibor Nagy ” Soomaaliya haddii ay diiday isbadalka AMISOM, Al Shabaab Ha iska celiyaan | Dayniile.com
Home Warkii Diplomasi Mareekan Tibor Nagy ” Soomaaliya haddii ay diiday isbadalka AMISOM, Al...
Diplomasi Mareekan Tibor Nagy ” Soomaaliya haddii ay diiday isbadalka AMISOM, Al Shabaab Ha iska celiyaan
Tibor Nagy oo ah Diblomaasi Mareykan ah oo xilal kasoo qabtay Wasaaradda Arrimaha dibadda sdalkaasi ayaa ka hadlay go’aankii dhawaan kasoo baxay Xukuumadda Soomaaliya ee lagu diiday wax ka bedeka howlgalka Midowga Africa ee AMISOM.
Tibor oo horey usoo noqday kaaliyihii xoghayaha Arrimaha Debadda ee Africa, sido kalana soo ahaa Danjiraha Maraykanka ee dalalka Guinea iyo Ethiopia ayaa sheegay in Dowladda Soomaaliya laga rabo inay iska celiso Al-Shabaab haddiiba ay diidan tahay qorshaha Midowga Africa ee AMISOM.
Wuxuu sheegay in Dowladda Soomaaliya ay leedahay ciidamo aad u farabadan oo awoodi kara inay soo afjaraan Al-Shabaab.
Haddii Dowladda Soomaaliya aysan ku qanacsaneyn isbeddellada la soo jeediyay in lagu sameeyo AMISOM, waa inay qaadato mas’uuliyadda ammaankeeda. Ciidammada Soomaaliya marka la isku daro Aad ayey uga fara badan badan yihiin al-Shabaab.. Dagaalka waa inay kusoo af-jaraan hal maalin..” ayuu yiri Tibor Nagy.
”Soomaaliya waxay u baahan tahay Dawlad u shaqeysa Soomaalida ee aan ka shaqeysan..” ayuu sii raaciyey oo u muuqda inuu ku jeesjeesayo mowqifka dowladda Soomaaliya.
Dolwadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sheegtay in aysan rabin islamarkaana raali ku ahayn qorshaha Guddiga amniga iyo Nabadda Midowga Afrika ee ah in howlgalka AMISOM la ballaariyo lagana dhigo mid si wadajir ah u fulinayaan Qaramada Midoobey iyo Midowga Afrika.
Midowga Afrika ayaa sheegay in Soomaaliya la gelinayo xeerka nambar 7 ee Qaramada Midoobey,howlgalka cusub oo billaabanaya Bisha January ee sanadka soo socdana loo qorsheynayo maalgelin joogto ah.
War ka soo baxay Wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in hindisaha Guddiga nabadda iyo Aniga ee Midowga Afrika ay diidday Soomaaliya mar kalena ay ku celineyso diidmadeeda qayaxan.
Soomaaliya ayaa sheegtay in ay muhiimtahay tixgelinta madaxbanaanida Soomaaliya iyo qaraarka Qaranada Midoobey ee tirsigiisu yahay 2568 soona baxay 2021 kaas oo ogolaanayay dib u habeynta AMISOM iyo in Ciidamada Soomaaliya ay amniga dalka kala wareegaan Ciidamada AMISOM.
Previous article“Kylian Mbappé wuxuu doonayaa kaliya inuu matalo Real Madrid” – Wargeys Spain ah
Mike Durant oo horey duuliye uga ahaa mid ka mid ah diyaaradihii Black Hawk ee lagu soo riday magaalada Muqdisho, sannadkii 1993 ayaa shaaciyay...
MADAXWEYNE FARMAAJO OO XEER KA SOO SAARAY KU TAKRI-FALKA IYO MUSUQMAASUQA...
Axmed Madoobe Oo Kulamo La Yeeshay Wafdi Ka Socday DF Iyo...